Amagumbi eChapman Cottage Deck - I-Airbnb
Amagumbi eChapman Cottage Deck
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguGarry
I-Inn inamagumbi eendwendwe asixhenxe abekwe kakuhle anebhafu yabucala. Ngamnye unezakhe izibonelelo ezikhethekileyo kunye nomlinganiswa. Amagumbi omgangatho wesithathu anemigangatho yabucala, elungele ukonwabela isidlo sakusasa sakho sakusasa kunye nembonakalo entle ejikeleze i-Inn. Onke amagumbi aneeTV ze-LED, kunye ne-intanethi engenazingcingo. ITavern ibonelela ngokutyela ecaleni komlilo, ibha esondeleneyo, kunye nedesika yangaphandle kunye netafile yomlilo yokutyela kwiinyanga ezishushu. Amagumbi eChapman awanazo iimbono zolwandle. Ulwandle lukumgama wokuhamba.
Ilanga eliqaqambileyo lizaliswe amagumbi kumgangatho we-3 kunye needekhi zabucala.
4.83 · Izimvo eziyi-276
Thatha kwimbali etyebileyo yaseYork ngokundwendwela iOld York Historical Society. Bona oyena "Oyena Mboniso weYork" kweliHlobo kunye nezinto zakudala zaseYork ezisukela kwiminyaka yoo-1500!
I-Mount Agamenticus (okanye iNtaba ye-A. njengoko abantu bendawo bayibiza) inikezela ngeembono zepanoramic kwiiNtaba eziMhlophe kunye ne-Atlantic ... ngosuku olucacileyo ungabona i-Boston skyline! Ilungele ukuHamba intaba kunye neBhayisekile.
Kufuphi ne-Inn kukho iindlela ezininzi zokuhamba ukuze ukonwabele ukhenketho lwakho olukhokelwayo olubandakanya iCliff Walk, iFisherman's Walk, kunye neYork River Walk. UkuHamba kukaFisherman kuya kukuthatha kwindawo esebenzayo yeZibuko laseYork kwaye kukukhokelela kwiBhulorho yaseWiggly, ibhulorho encinci yokunqunyanyiswa, kunye neSteedman Woods.
Thatha uhambo olubukekayo ecaleni koNxweme lwaseYork 1A uyonwabele uLwandle lwaseYork, iiVenkile zeCandy kunye neeNgqokelela kunye neNubble Lighthouse. Uhambo oluya e-York Beach aluphelelanga de ube uyibonile i-Goldenrod isenza i-taffy yayo yamanzi anetyuwa edumileyo!
Thatha uhambo olupholileyo ecaleni kwendlela yaseShore ungene ePerkins Cove/Ogunquit ukuze ufumane iposikhadi iNew England Views kunye nokuhamba ngeMarginal Way. Yiya emantla ukuya kwiMithombo ukonwabela iRachel Carson National Wildlife Refuge kunye neLudholm Farm Wildlife Estuarine Reserve.
Kufuphi ne-Inn yonwabele uxolo kunye nobuhle "bomhlaba wolonwabo" owaziwa ngokuba yiHartley Mason Reservation.
Ukuba i-antiquing yinto yakho, uya kufumana iivenkile ezingenakubalwa ecaleni kwendlela yoku-1 eyaziwa ngokuba yi "Antiques Alley"
Jonga indawo ngaselwandle, kuKhenketho lweLobster, uKhenketho lweLighthouse lusuka kwindawo entle yasePerkins Cove eOgunquit https://www.finestkindcruises.com/
Mhlawumbi isandla esizinzileyo seendawo ezilungileyo zokukuthatha kuKhenketho lweKayak olukhokelwayo kanye apha e-York Harbor http://www.harboradventures.com
Umbuki zindwendwe ngu- Garry
Abasebenzi bafumaneka iiyure ezingama-24.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- York Harbor